“Gantaal” waa gabay cusub oo uu tiriyey Cabdirashiid Jaamac Boos, oo jawaab u ah gabayga “Gudgude” oo uu tiriyey Axmed Sheekh Cali Heelaale. – Rasaasa News
Axmed Sheekh Cali Heelaale, oo dhawaan bilaabay gabayga Gudgude oo la sheegay in uu yahayGubadii saddexaad [Guba 3aad]. Dhagayso Boos [mp3player width=200 height=20 config=fmp_jw_widget_config.xml file=http://rasaasa.com/wp-content/uploads/2014/07/Gantaal-oo-Jawaab-u-ah-Gabaygii-Gud-gude-ee-Dhulbahante-Lagu-Weeraray-GUBA-3.mp3]Waxaa uu Dhulbahante dusha ka saaray ceeb iyo foolxumo ayna cidna xamisheen iyo in uusan beesha kuba jirin geesi damqada, waxaa gabayga Gudgude ku jira “Maantay arooskii galeen loogurbaan tumay’ee”, oo macnaheedu yahay Dhulbahante waxaa guursaday Isaaq yaradna waa laga bixin.
Guurka uu ku halqabsaday Heelaale, wuxuu ka tixraacay gabaygii ugu dambeeyey ee Cali Dhuux Aaden Gubadii 2aad ku xidhay oo ahaa “gun baan ahay gamba cad baan xidhnahay iyo gar naagood, gashaantida sideedoo kalaan guur u sugayaaye, jeeroon gamboolka iska rido guudk iga saaran Ogadeenka noo soo gabyoow waa gar xaajaduye.”
Beesha Dhulbahane oo ka mida beelaha looga dambeeyo gabayga, ayayna todobaad ku qaadan in ay ka jawaabto Gabayga Gudgude. Laakiin jawaab kasta oo ay ka bixiso gabayga Gudgude, ma noqonayso jawaab ku filan ka hor inta ay tirayso ceebta muuqata ee gogosheeda taal.
Cabdirashiid Jaamac Boos, ayaa ku dhiiqaystay Ogaden, isaga oo yidhi Geesinimo ka dheer Ogadeen oo Sayyid Maxamed Cabdile Xasan kolkii hiil ka waayey ayuu kiiyoo faras saaran xerada ii soo galay waanan dig
Gabaygu wuxuu ka bilowday qabsashadii Laascaanood ay qabsatay beesha Isaaq 2009-kii. xiligaas oo Helaale uu tiriyey tix gaaban oo ay ku jirto “Maantay arooskii galeen loogurbaan tumay’ee.” Waxaa bilowday dagaalo weerar iyo rogaal celis ah oo u dhaxeeya labada beelood. Ugu dambayntii waxay noqotay in Isaaq qabsado xarunta xudunta taariikhda Somaliyeed oo ah degmo dhulbahante leeyahay “Taleex.” Arintaas waxay keentay in Axmed Sheekh Cali Heelaale uu dhamaystiro 2014-ka tixdii gaabnayd ee uu bilaabay 2009-kii.
Qaybtii Labaad Sheekadii Biixi Haggaag Been-hawaas,
May 11, 2014 Rasaas